Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Himalayan Travel Mart dia mifarana amin'ny naoty ambony
Ny tena tanjon'ny Himalayan Travel Mart, natao ny 1-4 Jona, dia ny fametrahana an'i Nepal ho "vavahady mankany amin'ny Himalaya." Ny vokatra tadiavina dia ny fametrahana ny firenena amin'ny toerana tsara eo amin'ny sehatra manerantany ho toy ny toerana mahavita mandray hetsika amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny hetsika dia nahitana fandraisana anjaran'ireo mpividy 74 avy amin'ny firenena 36, ​​ary mpivarotra 50 mahery, nisolo tena ny faritra Himalaya, avy amin'ny toerana toa an'i Bhutan, India, Tibet, Indonesia, ary Nepal.
Ny zava-bitan'ny Mart indrindra dia ny fampiantranoana ny “International Bloggers Travel and Blog Conference” (ITBMC) voalohany tao amin'ny Park Village Hotel any Budhanilkantha. Ny ITBMC dia nampiantrano mpitoraka bilaogy iraisam-pirenena 108 sy mpiasan'ny haino aman-jery iraisam-pirenena tamin'ity hetsika ity, miaraka amin'ny fisongadinana dia bilaogera sy olona haino aman-jery iraisampirenena iraisana 9 izay niresaka ny maha-zava-dehibe ny fampitam-baovao sy ny fanaovana bilaogy amin'ny fampiroboroboana ireo toerana fizahan-tany toa an'i Nepal. Ny minisitry ny fahasalamana Andriamatoa Gagan Thapa, dia nilaza fa ity hetsika ity dia mikendry ny “hamerenana indray an'i Nepal ho toerana fizahan-tany azo antoka sy sariaka ho an'ny rehetra.
izao tontolo izao. "
Ny Himalayan Travel Mart Conference dia notontosaina tamin'ny 2 Jona tao amin'ny Soaltee Crowne Plaza,
izay nizaran'ny olo-manan-kaja sy manampahaizana momba ny fizahan-tany ny fahalalany sy ny zavatra niainany momba ny lohahevitra "Himalayan Tourism and Innovation & Marketing," izay nahafeno ny fenitra iraisam-pirenena ary tena hahasoa ireo matihanina amin'ny indostria ao Nepal.
Ny lanonam-panokanana dia nataon'i Nepal Right Hon. Ny filoha, Ramatoa Bidya Devi Bhandari, tao anatin'ny hetsika gala iray, izay nandraisan'ny Tale jeneralin'ny Birao fizahantany Nepal, Andriamatoa Deepak Raj Joshi, ny vahoaka ary nilaza fa io karazana hetsika io dia hamaritra indray ny indostrian'ny fizahantany. Ny filohan'ny PATA Nepal Chapter, Andriamatoa Suman Pandey, dia niresaka momba ny tanjona lehibe hikarakarana ity Travel Mart ity, ary ny filoha sy talen'ny fitantanana ny Air India, Andriamatoa Aswini Lohani, no mpitondra tenin'ny lahateny tamin'io hetsika io, izay nanambarany fa ny drafitra kilasy “1 +1” Business. Nanambara ny Air India fa hanao tetika fampiroboroboana, "Buy One, Get One Free."
Nidera an'i Nepal ho toerana fizahan-tany lehibe ny filoham-pirenena ary nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fampiroboroboana an'i Nepal amin'izao tontolo izao. Nanaja ny filohan'ny PATA teo aloha teo izy, Andriamatoa Andrew Jones, ary ny talen'ny talen'ny PATA, Dr. Mario Hardy, miaraka amin'ny fitantanana krizy sy ny mpitsabo ny fizahantany amin'ny fizahantany, Dr. Bert Van Walbeek. Ramatoa Sarah Mathews, ny filohan'ny PATA ankehitriny, dia niarahaba ny rehetra ihany koa tamin'ny fikarakarana ity mart iraisam-pirenena voalohany ity. "Miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny solontena iraisam-pirenena 225 avy amin'ny firenena maherin'ny 53, ka nahatonga azy io ho hetsika natrehan'ny solontena 500-plus, ity hetsika ity dia azo ampitahaina amin'ny fitiavan'ny mart fitsangatsanganana iraisam-pirenena lehibe manerantany," hoy izy.
Andriamatoa Shankar Prasad Adhikary, sekreteran'ny Ministeran'ny kolontsaina, fizahan-tany ary fiaramanidina sivily, tamin'ny fisaorana nataony dia nidera ny PATA Nepal Chapter tamin'ny fikarakarana hetsika manan-tantara toy izany. Raha jerena ny fahombiazan'ny Himalayan Travel Mart 2017, namarana ny hetsika ny Tale jeneralin'ny Birao fizahan-tany any Nepal, Andriamatoa Deepak Raj, "satria ny Himalayan Travel Mart dia nanjary lohalaharana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany, ny fampiroboroboana Ilaina ny Mart amin'ny ho avy. ” Amin'ity fanamarihana ity, ny Himalayan Travel Mart 2018 manaraka, dia nambara, izay kasaina hatao ny 1-3 Jona amin'ny taona ho avy.
Ny mpiara-miasa ofisialin'ny kaompaniam-pitaterana an'ny Himalayan Travel Mart dia ny Air India, ary ny mpiaramiasa Hotely ofisialy dia Soaltee Crowne Plaza.